Ny delta Airlines influencer gab dia mitifitra amin'ny alàlan'ny vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny delta Airlines influencer gab dia mitifitra amin'ny alàlan'ny vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Tamin'ny volana Aogositra, tsikaritra fa nisy ny fifanakalozan-dresaka mahery setra teo amin'ireo mpiorina an-tsokosoko manodidina ny Delta Air Lines rehefa nanambara ny orinasa fa hampandoavina US $ 200 isam-bolana ho an'ireo mpiasa tsy vita vaksiny fanoherana ny COVID-19.
Ny orinasa amerikana dia manana drafitra vaksinin'ny COVID-29.
Ny Delta Air Lines dia hametraka $ 200 isam-bolana amin'ny mpiasa tsy vita vaksiny.
Ny drafitry ny Delta Air Lines dia nitarika fiakarana 150% tamin'ny resadresaka influencer.
Orinasa maro no tonga nametraka drafitra mandat ny vaksiny taorian'ny fankatoavan'ny US Food and Drug Administration (FDA) tamin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech COVID-19 tamin'ny volana aogositra 2021. Ny Delta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) koa dia nandray fepetra henjana mba handrisihana ny mpiasa fampitomboana ny vidim-pahasalamana ho an'ny mpiasa tsy voamarina amin'ny drafi-pitsaboana azy ireo ary hihaona amin'ny fiakarana anton'ny fitakiana dia. Izany dia nitarika fiakarana 150% tamin'ny resadresaka momba ny vaksinina momba ny 'vaksininy' teo amin'ny tabilao fitarihana orinasa Delta Air Lines nandritra ny 90 andro lasa (Jona-Aogositra), tao anatin'ny telo volana lasa.
Hitan'ny mpanentana fa io no tetika farany niasa tamin'ny mpiasa cajole hanana jab COVID-19, satria ny tranga fitomboan'ny aretina dia nanaloka ny fomba fijerin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny fahatsapan'ny influencer dia tsara ihany koa tamin'ity fepetra ity satria io dia dingana iray ilaina hiatrehana ireo loza ara-bola mifandraika amin'izany satria ny fijanonan'ny hopitaly ho an'ny COVID-19 dia mitentina 50,000 XNUMX $ US airline isaky ny olona.
Tamin'ny volana aogositra, nisy fiakarana iray hafa tao amin'ny resadresaka influencer voamarina rehefa nanambara ny fiarahamiasa niaraka tamin'ny mpandraharaha fiaran-dalamby haingam-pandeha frantsay Thalys i Thalys mba hanomezana fifandraisana misy eo anelanelan'ny Amsterdam sy ireo tanànan'i Bruxelles sy Antwerp.
Toy izany koa, nisy fitomboana maranitra tamin'ny resadresaka influencer tamin'ny volana jolay, raha nitatitra ny tombam-bidiny voalohany isam-bolana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka avy any Atlanta hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19, taorian'ny nanapahana fatiantoka dimy-telovolana. Ny fangatahana fitsangatsanganana an-trano sy ny fivezivezena amin'ny raharaham-barotra miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny governemanta federaly dia nanohana ny Delta Air Lines hahatratra 652 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny Q2 2021.
Delta Air Lines dia nanambara ny drafitra mahatalanjona nataony tamin'ny volana Jona mba hanakarama mpanamory mpanamory mihoatra ny 1,000 amin'ny fahavaratry ny 2022, eo am-piandrasana ny fitomboan'ny fangatahan'ny dia rehefa vita ny areti-mandringana. Izany dia nanjary fitomboan'ny resadresaka influencer tamin'ny volana Jona.
Job Analytics Database dia nanambara fa ho an'ny ankamaroan'ny taona 2020, nanatri-maso ny fandefasana asa tokana ny orinasa. Na izany aza, ny Delta Air Lines dia nahita fiakaran'ny hetsika fandraisana mpiasa tamin'ny 2021. Niakatra ny lisitra avy tamin'ny asa 101 tamin'ny Janoary 2021 ka hatramin'ny 474 ny asa tamin'ny Aogositra 2021, niaraka tamin'ny fampitana asa 55% teo anelanelan'ny Q2 2021 sy Q3 2021.
Ny Delta Air Lines dia manamboatra mpiasa amin'ny 2021 hihaona amin'ny fangatahana be dia be. Ankoatr'izay, ny fandraisana ny orinasa dia misy andraikitra marobe ho an'ny tahiry vonona vanim-potoana toy ny serivisy serivisy ho an'ny mpanjifa, mpiasan'ny tapakila / vavahady, mpiasan'ny serivisy entana. Ny fandraisana mpiasa teknisiana sy injenieran'ny fiaramanidina dia nahita fiakarana hatramin'ny Jona 2021. Ny orinasa koa dia mifantoka amin'ny fampitomboana ny karama sy ny fizarana tsena any amin'ny faritr'i Latin sy EMEA.